Ukudla okungu-4 okuyingozi kakhulu ehlobo | Bezzia
UToñy Torres | 21/07/2021 23:55 | Amathiphu ezempilo
Okunye ukudla kungaba yingozi ehlobo nakwezincane e ukuqapha okungenabungozi kungaholela ezinkingeni ezinkulu zempilo. Amazinga okushisa aphezulu ehlobo ayimbangela yokwanda kwamagciwane, isikhunta namagciwane ahlukahlukene angcolisa ukudla. Ngomphumela wokuthi ukuxhumana nomzimba, kungadala izinkinga ezinkulu njengokufaka ushevu ekudleni.
Okuthile ngokungangabazeki kwaziwa nokuthi Njengomthetho, ijwayele ukuhlotshaniswa nokusetshenziswa kokudla emigoqweni, izindawo zokudla nezindawo lapho kudla khona ukudla. Kodwa-ke, ucwaningo nezibalo zikhomba ukuthi iningi lokudla okunoshevu ehlobo kwenzeka endaweni yasekhaya. Okukhombisa ukuthi ukunakekelwa okubalulekile akuthathwa ngokudla ekhaya.
1 Uhlu lokudla okungaba yingozi ehlobo
1.2 Imikhiqizo esekwe emaqanda
1.3 Amazambane athosiwe
Uhlu lokudla okungaba yingozi ehlobo
Ukuthi bayingozi kakhulu ehlobo akusho ukuthi abakwazi ukuba sebusika. Okungukuthi, eziningi ze- ukudla okusesimweni esibi okudliwayo kungumphumela wokuphathwa kabi. Ukushisa okuphezulu kusheshisa inqubo, kepha amakhaza asebusika awakuvimbeli. Ngakho-ke, into ebaluleke kunazo zonke ukuthi uhlale uthatha izinyathelo zokuphepha eziphezulu lapho uphatha ukudla.
Kepha izingozi zasehloboUkudla okuthile kuyingozi kakhulu ngoba kudliwa kakhulu ngesikhathi sehlobo. Izinyama ezintsha ezidliwa kusoso bese zichitha isikhathi esiningi ekushiseni ngaphambi kokupheka, amasaladi ane-mayonnaise eyenziwe ngokwenziwe kahle efrijini, ziyizibonelo nje ezithile. Kepha uhlu lokudla okuyingozi ehlobo lude, Lokhu kungukudla okungu-4 okuthwala ubungozi obukhulu.
Inyama esetshenziselwa ukulungisa ama-hamburger iyinhlanganisela yezinhlobo zezilwane eziningana, ngokuvamile ezingaziwa. Lapho usebenzelana nezilwane ezahlukahlukene, ubungozi bukhulu kwi-hamburger kune-cutlet noma ucezu lwenyama kusuka esilwaneni esisodwa. Ngokolunye uhlangothi, Inyama egayiwe inama-nooks amaningi nama-crannies lapho amagciwane anganda khona futhi kuba nzima ngokwengeziwe ukuthi ukushisa kufinyelele kulo lonke ucezu ngokulinganayo.
Ngaphandle kokukhohlwa lokho inkanyezi yokosa inyama ehlobo yi-hamburger. Ngakho-ke, kubalulekile ukugcina amakhaza kuze kube ngumzuzu wokubeka inyama ukupheka. Ngaphandle kokwephula iketanga elibandayo futhi ngaphandle kokuba nenyama ngaphandle ngaphandle kokuvikelwa.
Imikhiqizo esekwe emaqanda
Iqanda liwukudla okunempilo kakhulu, yize kungaba yingozi. I-Salmonella ingenye yama-bacteria akhula eqandeni futhi lesi sifo basibangela sibe sibi kakhulu. Ukugwema lokhu, uma uzolungisa ukudla okunamaqanda ozokukhipha ngaphandle kwekhaya, kungcono ukuthi usebenzise okunye okufana nezinye njenge-roe. Hhayi nje ukulungiselela imayonnaise, kodwa futhi nama-omelette aseSpain namanye amasoso asuselwa emaqanda.
Kuhle kakhulu, unempilo enhle futhi ungumlingani ophelele webhasikidi, kodwa onobungozi ehlobo. Ukosa amazambane, kusetshenziswa i-aluminium foil futhi ngaphakathi kuyenziwa umthombo wokushisa okuthi, lapho usakazeka, ube umswakama. Uma uwosa amazambane futhi ungawadli wonke, wagcine efrijini noma uwashintsha abe okunye ukudla, njengamazambane acubuziwe.
Le nyama ecebile futhi enempilo ingenye yezinto ezibucayi kakhulu futhi eziyingozi, ikakhulukazi ehlobo futhi uma kungathathwa izinyathelo zokuzivikela ezidingekayo. Inyama yenkukhu akufanele igezwe ngaphambi kokupheka, izandla nezitsha zasekhishini kufanele zihlale zihlanzekile kakhulu lapho uphatha inyama. Futhi okubaluleke kakhulu, inyama yenkukhu kufanele ihlale iphekwe kahle ngaphambi kokuyidla.
Indlela engcono yokugwema ubuthi bokudla ehlobo ukusebenzisa ukuqapha okukhulu. Ungalokothi ukhohlwe ukuthi kumayelana nokudla, noma ngabe kumnandi kangakanani umcimbi. Uma uzoba nabanye abantu futhi ungalahleka kalula ngokudla, ukhethe ezinye izitsha lokho kungalungiswa kusengaphambili. Ungazibeki engcupheni futhi ugweme ukuthi inkumbulo yokudla embi ikona ihlobo elihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Ukudla okungu-4 okuyingozi kakhulu ehlobo